Shirka Golaha Wasiirada dowlada Federaalka Soomaaliya oo looga hadlay arrimo kala duwan.[Masawiro]
Muqdisho:-Shirkii caadiga ahaa ee Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Dawladda Federaalka ay maanta yeesheen oo uu bilowgii shir-guddoomiyey Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumada Mudane Mahdi Maxamed Guled (Khadar), halka uu qeybtii danbe uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Mudane Xasan Cali Khayre ayaa lagu ansixiyey xubin ka mid ah Guddiga Madaxa Bannaan ee Dastuurka, loogana hadlay arrimaha amniga, maaliyada, heshiiska Xaquuqda Caruurta, shirweynaha amniga iyo horumarka dhaqaalaha iyo arrimo kale.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ayaa Golaha Wasiirada uga warbixiyey ahmiyada shirarka waaweyn oo Muqdisho lagu qaban doono 4ta iyo 5ta December 2017. ,Axmed Caynte Madaxa Hay’ada Xiriirka iyo Deeqaha ayaa Golaha siiyey warbixin ku aadan shirka 5ta December ee ah Somali Partnership Forum oo looga hadli doono horumarka dhaqaalaha, mashaariicda la qorsheynayo iyo arrimaha gargaarka oo ay beesha caalamku ka soo qeybgalayaan. Axmed Caynte ayaa sharaxay ahmiyada kulankan iyo sida looga doonayo Dawladda Federaalka inay ku soo bandhigto waxqabadkeeda si caalamka uu u qiimeeyo una dardargeliyo taageeradooda muhiimka ah.
Sidoo kale Axmed Diirshe oo ah Xoghayaha Joogtada ee Wasaarada Qorsheynta ayaa ka warbixiyey sida ay Wasaarada Qorsheynta u diyaarisey mashaariicda dalka oo dhammaantood la waafajiyey baahiyaha dowlada Federaalka iyo Qorshaha Horumarinta Dalka.
Wasiir ku xigeenka Dastuurka Hussein Abdi Elmi ayaa golaha wasiirada u soo gudbiyey talo soo jeedin ku aadan buuxinta xubin ka mid ah Guddiga Dastuurka ee Madaxa Bannaan oo horey u bannaanaatay. Wasiir ku xigeenka ayaa golaha ka codsaday inay ansixiyaan in Marwo Mumina Sheikh Omar oo horey u noqotay Wasiir ku xigeen iyo xildhibaan, lehna aqoon, waayo aragnimo, karti iyo hufnaan si ay u buuxiso booska bannaan oo ay xubin uga noqoto Guddiga Madaxa Bannaan ee Dastuurka. Golaha Wasiirada ayaa dood dheer ka dib si wadar-oggol ah u ansixiyey in Mumina Sheikh Omar ay xubin ka noqoto Guddiga Madaxa bannaan ee Dastuurka. Wasiirka Dastuurka iyo Wasiir ku xigeenka ayaa dadaal dheer ku bixiyey sidii booska bannaanaaday ay u buuxin laheyd shaqsi dumar ah oo leh waayo aragnimo, karti, hufnaan, aqoon iyo iyadoo horey dalka mas’uul uga soo noqotay.
Golaha Wasiiradda ayaa Wasiirka iyo Wasiir ku xigeenka Dastuurka ku ammaanay dadaalkooda iyo soo xulitaanka shaqsi ku habboon xilkan culus, tanoo ah tallaabo horey loo qaaday.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo safar shaqo ku tagey shalay Baydhabo ayaa ku soo biirey golaha wasiirada ugana warbixiyey safarkiisa, oo uu sheegay in si heer sare ah loo soo dhoweeyey, isla markaasna uu wadatashiyo ballaaran la soo sameeyey Madaxweynaha Koofur Galbeed, maamulka, Madax dhaqameedka, dhalinyarada, haweenka, culumada iyo dhammaan qeybaha bulshada oo dhammaan tood diyaar u ahaa xoojinta nidaamka dowliga ah. Ra’iisul Wasaraha ayaa sheegay in safarka uu baydhabo ku tagey ay qeyb ka tahay dardargelinta xoojinta xiriirka Dawlada Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada, isagoo ballanqaaday in mashaariic horumarineed laga fulin doono deegaanada Koofur-Galbeed oo ay ugu horeyso dhismaha waddada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo si shaqo abuur ay ugu noqoto dhalinyarada isla markaasna loo kordhiyo ganacsida iyo koboca dhaqaalaha dalka.